HomeWarka Xiisaha LehWararkii Ugu Dambeeyay Suuqa Kala Iibsiga Iyo Wargeysyada Maanta oo Arbaco Ah 18 May
May 18, 2022 Warka Xiisaha Leh, Suuqa kala iibsiga, Wararka Ciyaaraha, Wararka Wargeysyada 0
Manchester United ayaa u dhaqaaqday saxiixa daafaca dhexe ee Lille Sven Botman iyagoo isku dayaya inay AC Milan ku garaacaan saxiixa 22 jirka reer Holland. (Insider)
Daafaca Ajax Jurrien Timber ayaa sidoo kale diirada u saaran Manchester United, iyadoo la rumeysan yahay inay wadahadalo u dhexeeyaan labada kooxood ee ku aadan 20 jirka reer Netherlands. (Mirror)
Manchester City ayaa 30 milyan ginni kula soo wareegi doonta 23 jirka daafaca bidix ee kooxda Brighton ee Marc Cucurella xagaagan. (Mirror)
Madaxweynaha Barcelona Joan Laporta ayaa sheegay in kooxdu ay heshiis cusub u soo bandhigtay weeraryahanka France ee Ousmane Dembele laakiin waxa uu aaminsan yahay in 25 jirkan “uu tijaabiyay doorashooyin kale oo uu u arko inay ka fiican tahay”. (90 Min)
Chelsea ayaa ka mid ah kooxaha xiiseynaya Dembele, si kastaba ha ahaatee kooxda Premier League ayaa u baahan doonta inay iibiso mid ka mid ah xiddigaheeda si ay ugu fududaato u dhaqaaqista, iyadoo weeraryahanka Jarmalka Timo Werner, 26, ay u badan tahay inuu baxo. (Football.London)
Barcelona ayaa diyaarisay miisaaniyad dhan 35 milyan euro si ay isugu dayaan inay la soo wareegaan weeraryahanka reer Poland Robert Lewandowski, oo 33 jir ah, kana tirsan Bayern Munich , waxaana laga yaabaa inay 28 jirka reer Holland Memphis Depay qayb ka noqoto heshiis kasta. (Mundo Deportivo – Isbaanish)
Weeraryahanka Argentina Lionel Messi, oo 34 jir ah, ayaa ku biiri doona kooxda Major League Soccer ee Inter Miami sanadka 2023 marka uu dhamaado heshiiska labada sano ah ee uu kula jiro Paris St-Germain . ( Marca)
Xubnaha Messi ayaa beeniyay inuu u dhaqaaqayo Inter Miami waxayna sheegeen inuusan wali go’aansanin waxa uu sameyn doono marka uu dhamaado heshiiskiisa PSG . (Mirror)
Juventus ayaa u soo bandhigtay 29 jirka khadka dhexe ee France Paul Pogba kaas oo lagu heli karo beeca xorta ah marka uu dhamaado heshiiskiisa Manchester United xagaagan, heshiis seddex sano ah iyo 6.3 milyan ginni sanadkii. (Goal)
Manchester United , PSG iyo Real Madrid ayaa qarka u saaran inay kula loolamaan Juventus saxiixa 27 jirka khadka dhexe ee Lazio Sergej Milinkovic-Savic. (Calciomercato – Talyaani).
Daafaca dhexe ee reer Holland Matthijs de Ligt, oo 22 jir ah, ayaa ku dhow inuu u saxiixo qandaraas cusub ilaa 2026 Juventus. (90 Min)
Ciyaaryahanka garabka uga ciyaara Argentina Angel di Maria, oo 34 jir ah, ayaa heshiis hal sano ah la gaaray Juventus , waxaana uu ku biiri doonaa kooxda Serie A marka uu dhamaado qandaraaskiisa Paris St-Germain xagaaga. (Goal)
West Ham ayaa xiiseyneysa inay lasoo saxiixato 24 sanno jirka weerarka uga ciyaara Nigeria Emmanuel Dennis oo ka tirsan kooxda Watford, kaasoo ka haray horyaalka Premier League. (Mirror)
Tababaraha Tottenham Antonio Conte ayaa laga yaabaa inuu u weecan karo 20 jirka RB Leipzig Josko Gvardiol isagoo isha ku haya inuu mudnaanta siiyo daafac dhexe xagaagan. (Express)
Tababaraha kooxda Roma Jose Mourinho ayaa doonaya inuu 33 jirka Nemanja Matic keeno kooxda reer Talyaani, iyadoo ciyaaryahanka khadka dhexe ee Serbia uu beeca xorta ah ku heli karo xagaaga marka uu dhamaado qandaraaskiisa Manchester United . (Calciomercato – Talyaani)
Daafaca dhexe ee England James Tarkowski ayaa ka tagi doona kooxda Burnley marka uu heshiiskiisa dhamaado xagaaga, Newcastle United ayaa tartan xoogan ugu jirta saxiixa 29 jirkaan. (90 min)
Arsenal, oo lala xiriirinayo 25-jirka Manchester City iyo Brazil ee Gabriel Jesus, ayaa mudnaanta siin doona saxiixa weeraryahan xagaaga markaasoo ay lacag badan ku bixin doonaan kooxdooda xitaa haddii ay ku guuldareystaan ​​inay u soo baxaan Champions League. (Telegraph)
Jesus ayaan meesha ka saarin inuu ku biirayo Arsenal xagaagan, inkastoo Gunners ay u muuqatay mid waayi doonta afarta sare ee Premier League. (Metro)
Barcelona ayaa go’aansatay inay u ogolaato daafaca reer France Samuel Umtiti inuu baxo dhamaadka xilli ciyaareedkan, waxaana ay rajeynayaan in tababaraha Arsenal Mikel Arteta uu dib u soo celiyo xiisaha uu u qabo 28 jirkaan. (Mirror)
Garabka kooxda RB Leipzig ee Nigeria Ademola Lookman, oo 24 jir ah, ayaa Leicester City ku iibsan doonta 14 milyan ginni haddii ay doortaan inay amaahda uga dhigaan xagaagan si joogto ah. (DailyMail)
Tababaraha Leicester Brendan Rodgers ayaa doonaya inuu Lookman ku sii hayo kooxda isagoo ka mid ah ugu yaraan lix saxiix oo cusub suuqa kala iibsiga. (Telegraph)
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Manchester City iyo Scotland Caroline Weir, 26, ayaa ku dhow inuu beeca xorta ah ugu dhaqaaqo Real Madrid xagaagan. (Telegraph)